» Garoonka diyaradaha Kismaayo oo lagu qabtay Rag waxyaabaha qarxa watay
Garoonka diyaradaha Kismaayo oo lagu qabtay Rag waxyaabaha qarxa watay
December 4, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareWararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada maanka ay gacanta ku dhigen Rag iyo waxyaabihii qarxa ee ay wateen.
Ragaan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada Kenya e garoonka kusugan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ragaan la qabtay ee labada ah watayna waxyaabaha qarxa ay isku dayeen in ay gudaha usoo galaan garoonka diyaaradaha ee magaalada si ay qaraxyo ugaystaan.
Hase ahaatee qalab casri ah oo raadeer ah kuna xiran garoonka diyaaradaha magaalada ayaa fashiliyay qaraxaas, ciidamadana waxaa ay gacanta ku dhigeen labadii nin iyo waxyaabihii ay wateen.
Sargaal katirsan ciidamada kusugan garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa Warqaad.com usheegay in dhalinyaradan lasoo qabtay ay qirteen in ay katirsan yihiin Al-Shabaab.
Sidoo kale Sargaalkan ayaa sheegay in amaanka garoonka diyaaradaha e magaalada aad loo adkeeyay ayna adag tahay in falal amaan xumo ah laga gaysto.
Waa falkii saddexaad oo Al-Shabaab ka fashilmay inay qaraxyo ka gaystaan Kismaayo, maalin kahor waxaa la fashiliyay laba gaari oo lagu qarxin saldhigga magaalada waxaa kaloo ka fashilmay markii laba nin oo askarta Al-Shabaab ah ay ku guuldaraysteen inay wiil yar ku khasbaan inuu saldhigga magaalada geeyo waxyaabaha qarxa.
6 Responses to Garoonka diyaradaha Kismaayo oo lagu qabtay Rag waxyaabaha qarxa watay
samatar says:	December 4, 2012 at 18:01	laaya dabadeed hilibkooda ayda siiya
Reply	gargaar says:	December 4, 2012 at 19:29	asc ciidamada dawlada ,raaskiyambooni iyo amisom aad iyo aad bay umahadsanyihiin wanan idiin garab taganahay ee guuleysta oo laaya qawaarigta aan dulmiga mooye anan wax dan ah u haynin ummadda soomaaliyeed . nin lagu seexdow ha seexan ha seexaan soo jeedoo dhurway u fejignoooow
Reply	G S A says:	December 4, 2012 at 21:18	Waasax ee kurka halagajaro ragan usocday inay wax ayhaleyan dad an waxba galabsan ee lajahaada waa cadaw manaxayal wax magar tayal
Reply	tamaam says:	December 5, 2012 at 01:45	Werar jogsanmaayo inta kismaayo dadkii lahaa xoog looga haysto
Ee ay adomey iyo cagdheer dadka baadhanayaan gabdhahana kufsanayaan
Reply	Boosaaso wiil majeerteen says:	December 5, 2012 at 09:12	Tamaan sxb calaacal wuu dhamaday Hada Ogaaden anakoo majeerteen ah ayaa lasocona waana isxignaa e ha ogiyan raskambooni waa geesiyin imasa qarax ayay fashiliyeena dowlad kusheegana ma awoodo inay fa shiliso hal qarax marka raga aad cagdheerta ku caayay so dabada ayay kawasina dulliyahow duligu dhalayn.
Reply	saacid says:	December 5, 2012 at 09:54	tamam adiga yaa lagu kufsam doqonyahow naagaha
ka liita kismaayana dadkii lahaa baa haysta
hadal sidii dumarkii ha hayn xiniinyo ayay rabtaa
iyo ficil hadii kale iska aamus naagyahow